कस्तो छ तपाईको शुक्रबारको भाग्य? असार ११ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् – Hamro Nepali Samachar
Home/ राशिफल/कस्तो छ तपाईको शुक्रबारको भाग्य? असार ११ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
मेष: पढाई लेखाईमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ भने माया प्रेममा समस्या आउँनेछ । सभा समारोहमा सहभागि भई मिठा मिठा परिकार लिने अवसर प्राप्त भएपनि खानपानमा तालमेल नमिल्दा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँनेछ । मध्यान्ह्बाट समय राम्रो रहेकोले व्यावसायिक यात्राको तयारि गर्न सकिनेछ भने यात्रा उपलब्धिमुलकनै रहनेछ । शाहसिलो काम गरि नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउदा मन प्रशन्न हुनेछ ।